Macluumaadka Guryaha iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Qaboojiyaha waxaa lagu qeexi karaa in qaboojiyaha uu yahay habka qoyaanka iyo ka saarista kuleylka gudaha aagga bannaan si loo hagaajiyo raaxada dadka deggan. Qaboojiyaha waxaa loo isticmaalaa jawiga gudaha iyo ganacsiga labadaba. Nidaamkan waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu gaaro jawi ka raaxo badan gudaha gudaha dadka iyo xayawaannada kale. Sidaa darteed, […]Read More
Muuqaal Kooban Oo Ku Saabsan Qalabka Dharka Iyo Qaybaha Ugu Muhiimsan ee Qalabka Dharka
Dharka (Dhaqida): Dhar dhaqiddu waa dhaqidda dharka iyo qalabka (go'yaal iyo tuwaallo). Hababka dharka lagu dhaqo waxaa badanaa lagu sameeyaa meherad, qol, ama aag ku yaal guri ama guri la deggan yahay oo loogu talagalay ujeeddadaas. Tani waxay la xiriirtaa qolka dharka lagu dhaqdo. Cunsurka dhaqmaya, ama la nadiifiyay, ayaa sidoo kale caadi ahaan loo gudbiyaa [Read More
Muuqaal Kooban oo Ku Saabsan Qalabka Qaboojiyaha Hawada
Qaboojiyaha: Qaboojiyaha waa habka wax ka beddelka astaamaha hawada jagooyin aad u raaxo badan, sida caadiga ah in loogu qeybiyo hawada wax laga beddelay meel ballaaran sida dhismo ama gaari si loo hagaajiyo habboonaanta kuleylka iyo tayada hawada gudaha. Isticmaalka maalin kasta, qaboojiyaha waa mashiin yareeya diirimaadka hawada. Qaboojinta […]Read More
Kafee-sameeyaha ugufiican qiimeyaasha Suuqa
Kafee-sameeyaha: Kafee-sameeyayaashu waa aalado wax lagu karsado oo loo isticmaalo in lagu kariyo qaxwada. In kasta oo dhowr nooc oo kafee sameeyayaashu adeegsadaan habab kala geddisan oo kala geddisan, aaladaha ugu caansan, sababaha lagu nasto waxaa lagu shubayaa warqad ama shaandho bir ah oo ku dhex jirta marin biyoodka, oo la dul dhigayaa galaas ama dheriga cabitaanka dhoobada ah, dheriga wax lagu kariyo ee qoyska qamadiga. Coldwater waxaa lagu sii daayay […]Read More
Guud ahaan Dib u eegida suuqa ee Qaboojiye
Hawo qaboojiye: Waa nidaam lagu dabakhiyo meesha iyada oo kuleylka laga soo saarayo qolka loona daayo meelo ka baxsan dibadda. Hawada qabow ayaa markaa lagu wareejin karaa guriga oo dhan iyadoo loo marayo qabow. Qaboojiyeyaashu waxay u baahan yihiin tirooyin ay ku shaqeeyaan si ay u socdaan mooyee haddii entropy ay yaraynayso, taas oo ay mamnuuc tahay […]Read More
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Qalabka Daaweynta Biyaha
Daaweynta Biyaha (sifeynta biyaha): Miiraha biyaha ayaa meesha ka saara wasakhda iyadoo hoos u dhigaysa wasakheynta biyaha iyadoo la isticmaalayo carqalad jidheed oo ku filan, habka kiimikada, ama geedi socod dabiici ah. Shaandheeyaashu waxay u nadiifiyaan biyaha cabbirro kala duwan oo ah walxaha sida waraabka beeraha, biyaha la cabbo ee la heli karo, aquariumyada dadweynaha iyo kuwa gaarka ah, iyo isticmaalka aaminka ah ee balliyada iyo barkadaha dabaasha. Biyaha la cabbo […]Read More
Noocyada waaweyn, isticmaalka iyo astaamaha kululeeyaha biyaha ee Suuqa Caalamiga ah
Kuleyliyaha biyaha: Qalabka guriga ka kooban wuxuu ka kooban yahay gaas ama unug kululeynta korontada oo ka hooseeya taangiga halkaasoo biyaha lagu kululeeyo laguna keydiyo. Noocyada kululeeyayaasha biyaha iyo sidee bay u shaqeeyaan: Kuleyliyaha Nooca Haamaha Biyaha Aqlabiyadda guryaha badankood waxay leeyihiin kuleyliyaha biyaha u eg nooca taangiga oo ay ku shaqeeyaan gaas ama koronto. Badanaa hadlaa, kululeeyayaasha biyaha gaaska […]Read More
Qalabka Guryaha ee Suuqa Ka Dhex Muuqda Kuwaas Oo Qof Walba Uu U Baahan Yahay Inuu Ugu Iibsado Gurigiisa
Qalabka guriga: Qalabka guriga ama qalabka guryaha waa mashiin ka caawiya ujeedooyinka guriga sida karinta, dhaqida, iyo badbaadada cuntada. Qalabka waxaa loo kala qaadaa saddex fasal. Qalabka weyn Qalabka ugu weyn waa makiinad weyn oo ku jirta qalabka guryaha oo lagu dalbado shaqooyinka caadiga ah ee guriga sida cunto karinta, dhaqida dharka, ama ilaalinta cuntada. A […]Read More
Waxyaabaha Ugu Wanaagsan ee Isku Darsada Suuqa iyo Saadaalkooda Caalamka
Qase: Isku dariddu waa aaladda jikada ee loo adeegsado in lagu daro, lagu kariyo, ama lagu shubo cuntada iyo waxyaabaha kale. Mashiinka wax lagu kariyo ee joogtada ahi wuxuu ka kooban yahay weel wax lagu qaso oo leh gadaal bir bir ah oo wareegaysa, kuna shaqeeya matoor koronto oo salka ku haya. Qaar ka mid ah moodooyinka muhiimka ah ayaa sidoo kale burburin kara barafka iyo cuntooyinka kale ee la qaboojiyey. Kuwa badan oo ka duwan […]Read More
Qiimaha kululeeyayaasha korontada aduunka oo dhan
Kuleyliyaha korontada: Waa Qalab loogu talagalay qolalka kululeynaya ee u beddelaya korantada koronto kuleylka adoo adeegsanaya iska caabyeyaal soo saara tamarta iftiimaya. Resistors-ka waxaa laga sameysan karaa silig isku-dhafan biraha, isku-darka nuqulada aan nuxurka lahayn, ama wareegtooyin la daabacay. Qaybaha kululaynta ayaa laga yaabaa inay ogaadeen astaamaha istiraatiijiga ah ee lagu rakibay insulators, iska caabiyeyaasha birta ah ee lagu rakibay suufka qallooca oo lagu xiray ilaalintaRead More